Farshaxaniste wuxuu wax ka beddelay astaamo astaan ​​u ah xilligii coronavirus | Abuurista khadka tooska ah
Shalay waxaan wax ka baranay fikradda weyn ee isticmaale ee go'doominta bulsheed ee astaanta Google, si hadda loogu wajaho soo-jeedinta farshaxanno kale naqshadeynta astaamaha astaanta u ah xilligii coronavirus.
Oo haddaynu nidhaahno ma waxay ahayd sababta oo ah taas virus-kan ayaa wax walba badalaya welina ma ogin xitaa saamaynta ay ku yeelan doonto bulshada iyo nidaamka dunidan bilaha soo socda. Aan aragno kuwan ka badan soo jeedimaha xariifnimada ah si aan u aragno wax ku biirinta hal abuurka weyn.
Jure Tovrljan waa fannaanka haysta qaaday astaamahan astaanta u ah iyo cadeymo xaqiiqa ah kala fogaanshaha bulshada ee aan aragnay shalay isku mid ah soo jeedin kale oo loogu talagalay Google. Farshaxanistehan wuxuu ku ciyaaraa boos, muuqaal iyo summad si uu u abuuro taxane wanaagsan oo ah astaamo yaab leh oo daandaansi ah
Waxaan ka heli karnaa astaamaha mastarka ama ciyaaraha olombikada, ama isla kuwa ka socda NBA ama Starbucks. Ciyaaryahanka NBA ayaa xiiseynaya markii uu bedelo ciyaaryahanka kubbadda koleyga cajaladdaas gaarka ah si uu ugu geeyo laptop. Sawir xiiso leh laakiin mid muujinaya xaqiiqada inbadan oo adduunka ah.
Waxa kale oo jira astaanta Starbucks oo leh maaskaro taasi waxay kadhigeysaa astaanteeda astaanteeda, ama sida astaanta Goodyear ay u noqotay ta Badyear. Iyagu waa kuwo caqli badan oo isku mid ah. Funny sidoo kale waa nooca caanka ah ee biirka meesha aad ka arki karto "wuxuu u baahan yahay magac cusub."
Un daqiiqad gaar ah taariikhda aadanaha haddii ay wax waliba sidii hore ahaadaan iyo yaa ku khasbanaaday inuu noolaado. Halkan Madrid, halka laga soo qoray khadadkaan, la xiray oo aan guriga laga bixin, waxaa kaliya la rajeynayaa in dhowaan aan awoodi doonno inaan mar labaad dariiqyada marno oo aan iska fiirinno meel fog; Aynu rajaynno in habsiintu ay xigto wax walbana caadi ku soo noqdaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Astaamaha loo yaqaan 'Iconic logos' oo dib loo habeeyay xilligii coronavirus
Muuqaalka Google ee masaafurinta bulshada ee xariifsan ee uu sameeyay isticmaale